१४ औं महाधिवेशन : कास्की काँग्रेसमा नेतृत्वको दौडधुप | Ratopati
१४ औं महाधिवेशन : कास्की काँग्रेसमा नेतृत्वको दौडधुप
personश्याम राना मगर exploreकाठमाडौं access_timeभदौ ११, २०७७ chat_bubble_outline0
पोखरा । नेपाली काँग्रेसको चौधौं महाधिवेशन नजिकिँदै छ । आसन्न महाधिवेशनलाई लिएर नेतृत्वका लागि केन्द्रमा दाउपेच सुरु भइसक्यो । नेतृत्व आफ्नो हातमा पार्ने दाउमा केन्द्रका नेताहरु लागि परेका छन् । केन्द्रमा नेतृत्वको दाउपेच सुरु हुँदा कास्की काँग्रेस पनि नेतृत्वको होडमा लागेको छ । आफूलाई नेतृत्वको दाबेदारको रुपमा अघि सार्न आंकाक्षीहरु कम्मर कसेर लागि सकेका छन् । काँग्रेसले ६ पुसमा वडा अधिवेशन, ८ पुसमा ७ सय ५१ स्थानीय तहको अधिवेशन, ११ पुसमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको एक निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको अधिवेशन १३ पुसमा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै एकभन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको अधिवेशन १६ पुसमा र सातै प्रदेशको अधिवेशन ६ माघमा गरिसक्ने निर्णय काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले गरेको छ । काँग्रेसले पार्टीको १४औँ महाधिवेशन आगामी ७ देखि १० फागुनसम्म काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । कोरोना महामारिले महाधिवेशन टर्ने संकेत देखिए पनि उनीहरु संगठन विस्तारमा तल्लिन छन् ।
आसन्न महाधिवेशनलाई लिएर नयाँ पुस्ताले पनि चासो नदेखाएका भने होइनन् । यद्यपि, पूराना नेतृत्वलाई बाइपास गरेर अघि जान सक्ने अवस्था भने छैन । ‘पूराना पुस्ताका नेताहरु कि प्रदेशमा जानु प¥यो नत्र जिल्लामै, कहि न कही त अस्तित्व हुनु प¥यो नि त,’ कास्की काँग्रेसका एक क्रियाशिल नेताले भने, ‘यसले गर्दा नयाँ नेतृत्वको चान्स यसपालि पनि कमै छ । अनुभवको हिसाबले पनि ।’ नयाँ तथा पुराना पुस्ताका गरि करिब एक दर्जन नेताले नेतृत्वको लागि आकांक्षा देखाए पनि सबैभन्दा बलिया भने वर्तमान उपसभापति आइबहादुर गुरुङलाई नै काँग्रेस वृतले लिएको छ ।
अघिल्लो महाधिवेशनमा कास्की काँग्रेसमा एकछत्र राज गरेका शुक्रराज शर्मालाई पराजित गर्दै नेतृत्वमा पुगेका वर्तमान सभापति कृष्ण केसीले अर्को पटक नेतृत्वमा नआउने घोषणा गरिसकेको अवस्थामा नैतिक हिसाबले पनि नेतृत्वमा केसीको पुनरागमन हुने सम्भावना निकै कम छ । वर्तमान सभापतिले खासै इच्छा नदेखाएको हुँदा उनी नै महाधिवेशनमा भारी पर्ने देखिएको एक नेताले बताए । यद्यपि, जिल्ला स्तरबाट नेतृत्वमा आउनुपर्ने माग आए, केसी ब्याक हुन पनि सक्छन् । उनी स्वयं आफैंले अर्को महाधिवेशनमा नजाने घोषणा गरि सकेको हुनाले पनि केसीको पुनरागमन हुन सक्ने सम्भावना निकै कम रहेको काँग्रेस नेताहरुको अनुमान छ ।
१७ वर्षसम्म कास्की काँग्रेसको एकछत्र राज गरेका शुक्रराज शर्मालाई चुनावी रिङमा पराजित गर्दै नेतृत्वमा उक्लिएका केसी काँस्की काँग्रेसका दर्बिलो नेता पनि हुन् । चुनावी नतिजाकै कारण बोलीचालि समेत बार्ने केन्द्र तहका नेताहरुलाई माथ खुवाउँदै आफ्ना प्रतिद्वन्दीलाई सँगसँगै लिएर संगठन विस्तारमा लाग्न सक्ने उनको खुबीको काँग्रेस वृतमा राम्रै चर्चा हुने गर्छ । कास्की काँग्रेसका शक्ति केन्द्र शुक्रराज शर्मा र कृष्ण केसी, दुवै जना एक साथ उभिदा दुवै जना जता उभिन्छन् त्यतै पल्ला भारी हुने पक्का छ । नेताहरु गुटबन्दीमै गए पनि शुक्रराज र कृष्ण केसी नै भारी हुने पनि नेताहरु बताउँछन् । शुक्रराजको पनि नेतृत्वमा आउने सम्भावना कम भएको हुँदा वर्तमान उपसभापति गुरुङको पल्लाभारी हुने पक्कापक्की जस्तै छ ।
तर, नेतृत्वमा आउन करिब एक दर्जन आंकाक्षी तम्तयार अवस्थामा बसेका छन् । वर्तमान उपसभापति आइबहादुर गुरुङ, क्षेत्रीय सभापति ब्रिजमान गुरुङ, बजिरमान श्रेष्ठ, रामबाबु भण्डारी, गुरु बराल, लक्ष्मी पाण्डे, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज कुँवर, वर्तमान सचिव देवेन्द्र रानाभाट, सचिव सुदिपमोहन भट्टराई, क्षेत्रीय सभापति पोषनाथ शर्मा, देवराज चालिसे लगायतका नेताहरु आंकाक्षीको रुपमा देखिएको कास्की काँग्रेस स्रोतले बतायो ।
देवराज चालिसे आंकाक्षीको रुपमा देखिए पनि उम्मेदवारी लिन नचाहने स्वभावका नेता हुन् । तर सभापति केसी र नेता सालिसे जिल्ला राजनीतिबाट प्रदेश वा केन्द्रीय राजनीतिमा आउन इच्छुक देखिएको बुझिएको छ । उनीहरु दुबै जना केन्द्रीय प्रदेश पदाधिकारी वा केन्द्रीय सदस्यको तयारीमा देखिन्छन् ।
अर्का नेता शोभियत अधिकारी, विरेन्द्र बिजुक्छे र गंगाधार पराजुली आंकाक्षीको रुपमा सुनिएका छन् । पत्रकारिताको राजनीतिक केन्द्रसम्म पहुँच राख्ने पराजुली, शोभियत अधिकारी, विरेन्द्र बिजुक्छेले पनि अन्तिममा आएर हात झिक्न सक्ने अनुमान छ । उसो त कास्की काँग्रेस भित्रको यो मौन भीडन्त हो । नेताहरु सतह देखिसकेको छैनन् । वर्तमान समयमा वर्तमान उपसभापति गुरुङ भारी देखिए पनि अन्तिम समयमा समिकरण उल्टिन पनि सक्छ । तर, पार्टीमा पु-याएको योगदान र भुमिकाकै आधारमा नेतृत्वमा गएमा उनी नै भारी हुने पक्का छ ।
‘चुनावमा मात्रै पद लिन आउनेलाई यसपालि कास्की काँग्रेसमा पद लिन गाह्रो छ । लामो समयसम्म काम गरेका, प्रतिपक्षको भीडन्त र पार्टीको आन्तरिक चुनावमा पनि खटेर काम गर्नेले नेतृत्व पाउने छ,’ कास्की काँग्रेसका एक नेताले भने, ‘अरु बेला पार्टीलाई गाली गर्ने, अरु बेला बाहिर बस्ने चुनावको मुखैमा आएर दशौं जना बिसौं जना आंकाक्षी देखिएर मात्रै पनि भएन नि त । उसको भुमिका के हो ? यसले पार्टीमा कत्तिको भुमिका छ । पार्टीले रुचाएको छ कि छैन भन्ने हो ? उम्मेदवारी घोषणा गरेर मात्रै हुने होइन नि त !’
यसरी, सामान्य हिसाले मुल्यांकन गर्दा पनि कास्की काँग्रेसमा पनि नेतृत्वमा नयाँ पुस्ताको आगमनको सम्भवाना देखिन्न । कास्की काँग्रेसका केही युवा नेताहरु पुराना पुस्तालाई काउन्टर दिने गरि नेतृत्वमा आउने अभियान नथालेका पनि होइनन् । तर, तत्कालै उनीहरु नेतृत्वमा उदय हुने संकेत भने मिलेको छैन । काँग्रेस पदाधिकारी बैठकको निर्णयानुसार नयाँ सदस्यता शतप्रतिशत थप्ने, क्रियाशिल सदस्यता ५० प्रतिशत थपिने हुँदा कास्कीमा २० हजारको हाराहारिमा क्रियाशिल सदस्य हुने छन् । अघिल्लो महाधिवेशनमा ७ सय १० जिल्ला प्रतिनिधि रहेकोमा आसन्न महाधिवेशनमा भने प्रतिनिधिले १५ सय नाघ्ने पक्का छ ।
केन्द्रीय कमिटीको विधान अनुसार मतदाता जहाँ छ त्यहीबाट क्रियाशिल सदस्यता लिनुपर्ने छ । सदस्यता भरे पनि काटिने नयाँ प्रावधान ल्याइएको छ । यस्तोमा त्यस्ता सदस्यको उमेदवारी नहुने पक्का छ । यदी, मतदाता नभएको ठाउँमा क्रियाशिल सदस्य दर्ता गराई भोलि उमेदवारको रुपमा उठे विधान अनुसार उजुरी गरेको खण्डमा क्रियाशिल सदस्यता खारेज गर्ने सम्भावना समेत रहन्छ ।
वडा–वडामा नयाँ सदस्यता वितरणदेखि क्रियाशिल सदस्यता नविकरणमा बढ्दो चासोले पनि कास्की काँग्रेसमा सुरु भएको चुनावी सरगर्मी भेउ पाउन मुस्किल छैन । आसन्न महाधिवेशनमा तल्लो तहमा गुटबन्दी नबनाउने मनसायमा नेताहरु एकमत देखिए पनि अन्तिम समयमा शक्ति सन्तुलन बिग्रन सक्छ ।